Cafe Zee Server Error — MYSTERY ZILLION
Cafe Zee Server Error
November 2008 edited November 2008 in Other
cafezee ကပြောတယ် data lost တဲ့ ပြန်ခေါ်လို့လည်းမရဘူး ဖြစ်နေတယ်
ဆာဗာမှာ ပြန်အင်စတောလုပ်ရင် ဒေတာ တွေ ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ကူပေးကြပါခင်ဗျား မြန်မြန်လေး....
ဖိုင်တွေ ပျောက်သွားတယ်တဲ့ ကူပေးကြပါဦး အရပ်ကတို့ရေ............
အကိုက Version ဘယ်လောက်သုံးတာလဲ။
CafezeeServer Run နေတုန်း TaskManagerကနေEndTask လုပ်လိုက််လို့ဖြစ်တာဗျ။
Data Lossမဖြစ်ချင်ရင် ဒီလိုစမ်းကြည့်နော်။
AllProgram Filesကနေ Cafezee Menu ထဲက Backupဆိုတာရှိတယ်
FileMenu အောက်မှာImportDatabaseFiles ဆိုတာရှိတယ်ဗျ။
c:\_windows\_system32\_ မှာ ( *.pra ) ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ search လုပ်လို်က်ပါ။ တွေ့ရတဲ့ xxxxx.pra ဖိုင်တွေထဲက နောက်ဆုံး modified လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို windows.pra လို့ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် cafezee ကို ပြန်ဖွင့်ပါ။ ဖိုင်တောင်းရင် ခုနက အမည်ပြောင်းထားတဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ မတောင်းပဲ ကောင်းချင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုဖြစ်ဖူးတယ်ဗျ။ နည်းနည်း ကြာသွားလို့ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒီလောက်ဆို error ရှင်းလို့ရမှာပါ။
ဟုတ် ဖြေပေးကြသော ဇော်သက် နဲ့ ကိုချမ်းမင်းအောင် တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...........
ကိုချမ်းမင်းအောင် ပြောသော နည်း ပုံစံ နဲ့ အဆင်ပြေသွားပါကြောင်းပါခင်ဗျား..........
ချမ်းမင်းအောင်သည် သာ ကျွန်တော်၏ အမည်မှန်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေရှင် အပ်ပါသည်။ ဂျစ်ပစီလေးအတွက်လည်း၀မ်းသာပါတယ်။
နာမည်လေး edit ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ဂျစ်ပစီလေး ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား
ကျနော် cafezee က sever မာ စကၤနစၤလုံးပဲေပၚလို ဘယၤလို လုပၤရမလဲ version 3.9 ပါ
You have to use cafezee full version ko Zawhtetpaing. Now you are using cafezee trial version. You can download cafezee full version at www.nyinaymin.org.
And also you can download here http://www.mediafire.com/?r2jchk0dh23rlku .Copy download link from ko nyi nay min.
July 2012 edited July 2012 Registered Users